BIM - usoro a na - apụghị ịgbagha agbagha nke CAD - Geofumadas
Nọvemba, 2015 AutoCAD-AutoDesk, Apụta, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley, My egeomates
N'ebe anyị na Geo-Engineering, na Okwu BIM (Informationmepụta ihe ọmụma ụlọ), nke na-enye ohere ịme ihe dị iche iche dị adị n'ezie, ọ bụghị naanị na nnọchite anya ha kama na usoro ndụ ha dị iche. Ọ pụtara na okporo ụzọ, akwa mmiri, valvụ, ọwa mmiri, ụlọ, site na echiche ya nwere ike ịnwe faịlụ na-egosipụta ya, nke nwere atụmatụ ya, usoro iwu ya, mmetụta na gburugburu ebe obibi, ọrụ, ojiji, nnwere onwe, mmezi, mgbanwe, ego bara uru karịa oge yana ọbụnadị mmebi ya.
N'iji usoro nke ndi na-ekwuputa echiche a na-ekwu okwu a, uzo nke BIM jikọtara ya na mmepe nke ntinye dị mkpa maka mmepe ya, ikike nke ndị otu iji jide ma jikwaa ozi (nke ọhụrụ na nke dị ugbu a), mmejuputa nke ụkpụrụ ụwa, akụrụngwa data na ịme ngosipụta nke usoro mgbanwe dị iche iche metụtara njikwa ala. Ihe ịma aka nye BIM bụ na ọ ruru oge mgbe ọ gụnyere mmekọrịta dị na PLM (Product Lifecycle Management), ebe ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na ọrụ na-achọ ijikwa okirikiri yiri ya, agbanyeghị na akụrụngwa ndị na-adịchaghị etinye akụkụ ahụ.
A n'ókè nke convergence abụọ ndị a na ụzọ gasị (BIM + PLM) bụ echiche nke smart n'obodo (Smart Ọnọdụ), ebe ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ na-etinye pụọ, ya mere ngwa ngwa ina nke nnukwu obodo ndị dị otú ahụ dị ka irreversibility ka na-adịghị agwụ agwụ mmadụ nka na sayensị na nkà na ụzụ etinyere mkpebi.
N'okpuru ebe a, anyị na-akọwa ụfọdụ akụkụ ndị bụ isi na ọganihu metụtara BIM na mmekọrịta ya na ngwá ọrụ nkà na ụzụ a ma ama.
Bew na Richards na-eme ka ụzọ BIM dị na ogo anọ, gụnyere Ngo efu, dị ka a hụrụ na eserese. Mee ka o doo anya, na nke a bụ ụzọ site na nhazi ọkọlọtọ, ọ bụghị ọtụtụ n'ime mkpekọrịta zuru ụwa ọnụ, bụ nke nwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu.
N'ujuputa BIM na 0 (CAD).
Nke a kwekọrọ na Kọmputa Aided Design, nke a hụrụ site na ngwa ochie anyị hụrụ na 80. Maka oge ndị ahụ, ihe ndị dị mkpa ga-ewere eserese teknụzụ nke emerelarị na usoro nke atụmatụ, iji digitized n'ígwé. Anyị na-echeta dị ka ihe atụ ọmụmụ nke AutoCAD na Microstation n'oge ndị a, nke na-enweghị mmebi nnukwu usoro ha, emeghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị Ihe osise; ndọtị ha kwuru ya (Drawing DWG, Design DGN). Ikekwe naanị sọftụwia nke na-eji anya nke uche karịa nke ahụ bụ ArchiCAD, nke kemgbe 1987 kwuru maka Virtual Building, na nlelị nke ịbụ onye Hungary na afọ agha oyi. Ọzọkwa n'ime usoro a gụnyere njikwa nke data na-abụghị georeferenced site na ngwa ndị ọzọ metụtara njikwa ọrụ, dịka mmefu ego, atụmatụ, njikwa iwu, wdg.
N'uzo 1 BIM (2D, 3D).
Nke a na - eme n'ime afọ iri gara aga, na ntozu nke ebe ọrụ enwere ike ịkpọ 2D. Ihe owuwu a na 3D oghere na-amalitekwa, ọ bụ ezie na ọ bụ n'oge oge ochie ya, anyị nwere ike icheta etu o si sie ike ime ya na AutoCAD R13 na Microstation J. Enwere ụzọ ngosi ụzọ dị atọ, mana ha ka bụ vekịkị mejupụtara arc, ọnụ, ihu na ikpokọta ndị a. N'ihe banyere AutoDesk, nsụgharị dịka SoftDesk nwere echiche dị iche iche dịka oke ebe ọ bụ na AutoCAD 2014, bụ nke e ji eme ụzọ na nyocha gbasara ohere gbasara mbara igwe, mana ihe niile dị n'azụ igbe ojii nke ihe ngwọta dị ka EaglePoint mere karịa «acha«. Microstation etinyela Triforma, Geopack na AutoPlant n'okpuru mgbagha yiri nke a, yana njikọ njikọ gbasara oghere nke njikọ njikọ na-enweghị usoro nkwekọrịta.
Nke a afọ iri, n'agbanyeghị na e nwere ọbụna na ụdị na-etozu akpọkwa tụụrụ ime na-ghọtara n'ezie dịtụ amanye mwekota na vetikal ngwọta maka AEC enwetara site na ndị ọzọ, gụnyere Architecture, Construction, Geospatial Mmeputa, Manufacturing na-aga aga.
AutoDesk ekwughị banyere BIM ruo mgbe Revit zụtara na 2002, mana ijikọta ngwọta dịka Civil3D na-ewe ogologo oge. N'ihe banyere Bentley, ntinye nke atụmatụ XFM (Extensible Feature Modelling) na Microstation 2004 dị mkpa na n'oge mgbanwe a maara dị ka XM, nyiwe nke atọ dịka Heastad, RAM, STAAD, Optram, Speedikon, ProSteel, PlantWise, RM- LEAP Bridge na HevaComp. Na 2008 Bentley malitere Microstation V8i, ebe XFM na-etolite na I-nlereanya dịka ọkọlọtọ nkwado.
Ngwupụta BIM nke Ngo 2 (BIMs, 4D, 5 D)
Ihe kacha sie ike n’oge a nke BIM Level 2 bụ ụkpụrụ; Karịsịa ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ndị nke onwe ha na-eji ụta ha ma chọọ ịmanye ndị ọzọ iji ọchịchọ nke aka ha. N'ihe banyere sọftụwia maka mpaghara geospatial, ọ bụla sọftụwia na - akwụghị ụgwọ nke megoro ike ịhazi ya na ogo nkwekorita nke Open Geospatial Consortium OGC nọchitere anya ugbu a. Mana na mpaghara CAD-BIM, enweghi atụmatụ OpenSource, dị ka ruo ugbu a sọftụwia nwere sọftụwia nwere ikike ị tozuru etozu bụ LibreCAD, nke bụ naanị na ọkwa 1 -ma ọ bụrụ na ọ bụghị nke ahụ na-ahapụ 0 Ọkwa. Privatelọ ọrụ nkeonwe ewepụtala nsụgharị ndị nweere onwe ha, mana ịhazi ụkpụrụ BIM adịla nwayọ, n'olu ụfọdụ n'ihi na ndị nwe obodo na-achị achị.
Onyinye nke ndị Britain dị mkpa, na omume ha nke ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile azụ, emeela ka ọkọlọtọ British, dị ka koodu BS1192: 2007 na BS7000: 4; Ndị a emeela ochie site na ụgbọ elu akwụkwọ gaa na BIM Ọkwa 1. BS8541: 2 ugbua pụtara na ụdị dijitalụ na n'afọ iri a BS1192: 2 na BS1192: 3.
Aghọtaghi ihe kpatara BentleySystem ji mee ogbako Infrastructure nke afọ na onyinye ya na London, afọ 2013, 2014, 2015 na 2016; yana nnweta nke ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọnụọgụ ahịa nke ndị ahịa Britain -Enwere m ike ịtụgharị uche banyere ijegharị isi ụlọ ọrụ Europe site na Holland na Ireland-.
N'ikpeazụ, mgbe niile n'ime OGC, ọ ga-ekwe omume ịkwalite ọtụtụ ụkpụrụ nkwenye na-ekwupụta na BIM, karịsịa GML, ihe atụ ndị dị ka InfraGML, CityGML na UrbanGML n'ihu.
Agbanyeghị na mbọ ọtụtụ afọ ugbu a n’ime afọ iri nke BIM Ọkwa 2 na-anwa iru njikwa nke usoro ndụ nke ụdị ahụ, ha ka enweghị ike iwere ya dị ka ihe zuru oke ma ọ bụ tozuru oke, yana ụgwọ pụtara ìhè na 4D na 5D nke gụnyere Mmemme nke Mwube na Di omimi. Uzo di na nchighari nke ntughari uche putara ihe na nnabata / inweta nke ulo oru na kwa ncha zuru oke maka nhazi.
Nhazi BIM 3 (Njikọ, Ndụ Nhazi Ndụ, 6D)
Ogo nke nhazi nke a na-atụ anya na Nzuzo BIM na 3, mgbe 2020 na-agụnye atụmanya dị ịtụnanya maka ịdị n'otu n'usoro iwu: Data nkịtị (IFC). Akwụkwọ Ederede A Na-ahụkarị (IDM) na Usoro Nhazi (IFD).
A na-atụ anya ka ngbanwe nke ndụ ndụ ga-eduga Intanet nke Ihe (Intanet nke ihe IOT), ebe ọ bụghị nanị ala nke ala ahụ ka a na-emezi, ma ngwaọrụ na ihe owuwu ndị bụ akụkụ nke ụlọ ahụ, ihe ndị e ji eme njem (ihe onwunwe nwere ike ibugharị), ngwaahịa maka oriri anụ ụlọ, akụ na ụba, ihe niile dị na ya ndụ nke metụtara iwu ọha na eze nke ndị nwe, Gliders, Designers and Investors.
N'ihe banyere Bentley Systems, echetara m na m hụrụ site na ngosipụta 2013 na London, njikọta nke usoro abụọ nke Usoro Nkọwapụta Project:
PIM (Ihe gbasara Ozi Ụlọ Ọrụ) Breef - Echiche - Nkọwapụta - Nhazi - Ihe owuwu / Kọmitii - Nnyefe / Mmechi
AIM (Akụrụngwa Ozi Ụdị) Ọrụ - Jiri
Ọ bụ ọhụụ na-adọrọ mmasị, na-eche na akụkụ ndị a sitere na afọ iri na-abịanụ, mana na ị na-aga n'ihu, ha na-ekwe ka ọkọlọtọ wee pụta. N'agbanyeghị na enwere ọtụtụ ngwọta kwụ ọtọ, nghazi ọrụ nke CONNECT Edition na -emepụta ọnọdụ Hub n'ime otu gburugburu ebe Microstation bụ ngwa ọrụ ihe atụ, ProjectWise nke njikwa ọrụ ngo yana AssetWise ọrụ njikwa ọrụ. , si otú a na-emechi oge abụọ dị mkpa, Opex na Capex nke BS1192: 3.
A na-atụ anya na n'oge a, a ga-atụle data ahụ dị ka ihe akụrụngwa, na ọ chọrọ ka a kesaa chanel, nhazi iji mezuo ya nke ọma, nakwa na ọ ga-adị na ọnọdụ oge dị iche iche na oke ndị ahịa.
Obodo Smart bụ ihe mkpali nke BIM
Ihe ịma aka nke BIM Ọkwa 3 bụ na ọzụzụ anaghịzi agbakọta site na faịlụ faịlụ kama site na ọrụ sitere na BIM-Hubs. Omume na-atọ ụtọ nke ahụ ga-abụ Smart Cities, nke na-ejiworị ikpe dịka Copenhagen, Singapoore, Johannesburg na-eme mgbalị na-adọrọ mmasị iji jikọta gọọmentị gọọmentị na gọọmentị, ma ọ bụrụ na anyị ekwe ka onwe anyị n'okwu ndị ahụ. Mana ọ bụ ihe ịma aka na-atọ ụtọ, na na gburugburu nke BIM Ọkwa 3, a na-eme ihe omume mmadụ niile. Nke a pụtara na akụkụ dị iche iche dịka ego, agụmakwụkwọ, ahụike, na gburugburu ebe obibi na-esonye na okirikiri metụtara njikọ gbasara mbara igwe. N'ezie, anyị agaghị ahụ mmemme arụmọrụ nke ndị a n'ime afọ iri a, ọ bụ ihe a na-enyo enyo ma ọ bụrụ na ha na-eme n'oge a, ọ bụrụ na anyị echee na ebumnuche ndị a bụ iji hụ na mmelite nke ndụ ndị bi na mbara ala a -ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ site na obodo ndị ahụ- na mgbake nke mbibi nke gburugburu ụwa -nke anaghị adabere na obodo ole na ole-.
Ọ bụ ezie na obodo ukwu adịghị gburugburu akuku, ihe na-eme na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-achịkwa nkà na ụzụ bụ ndị dị egwu.
HEXAGON, site na inweta ụlọ ọrụ dịka Leica nwere ike ijikwa njide data n'ọhịa, site na inweta Erdas + Intergraph nwere ike ijikwa ịme ngosipụta gbasara ohere gbasara oghere, ugbu a ọ na - eme AutoDesk na - enyo enyo iji chịkwaa imewe, imepụta na mmegharị. Na-ekwughi banyere ụlọ ọrụ niile nke emporium gụnyere, nke ebumnuche ha niile n'otu ihe ahụ.
N'aka nke ọzọ, Bentley na-achịkwa nhazi, ọrụ na okirikiri nke ọtụtụ ụlọ ọrụ ihe owuwu ihe owuwu, ihe owuwu, ụlọ ọrụ obodo. Agbanyeghị, Bentley eyighị ka o nwere mmasị na izu ohi ndị ọzọ, anyị hụkwara etu o si enwe mmekọrịta na Trimble nke zụtara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile asọmpi metụtara njikwa na ịme ngosi ihe, SIEMENS nwere njikwa dị elu nke ụlọ ọrụ na-emepụta ihe na Microsoft nke ahụ na-ezube ịkwaga na akụrụngwa data -ka ọ ghara ịhapụ gị, n'ihi na n'ime ebe a ọhụụ ị na-efu site na Office Windows + gị-
Ebe ọ bụla anyị hụrụ ya, nnukwu ụlọ ọrụ na-akụ nzọ na BIM maka ikike ya dị nso na anyụike atọ ga-ebugharị ọrụ nke Smart Cities: Means of Production, Infrastructure Supply and Innovation na ihe ọhụrụ maka ngwaahịa / ọrụ. O doro anya na enwere nnukwu anụ mmiri ka ahapụ iji dozie ya, dịka ESRI, IBM, Oracle, Amazon, Google, ịkpọ aha ole na ole anyị maara nwere mmasị na atụmatụ Smart Smart ha.
O doro anya na azụmahịa na-esote bụ Smart Cities, n'okpuru njikọta BIM + PLM ebe ọ na-agaghị enwe Microsoft ga-ejide 95% nke ahịa ahụ. Nke a bụ usoro dị mgbagwoju anya karị, a na-ahụkwa na ụlọ ọrụ ndị na-adịghị nzọ na azụmaahịa a ga-ahapụ ịhapụ ịme CAD, akwụkwọ Excel na sistemụ CRM emechiri. Ulo oru ichikota bu ndi na adighi n'ime usoro ndu ndu nke Architecture, Engineering, Construction and Operation (AECO); ndị na-achịkwa ọrụ ndị ọzọ nke mmadụ n'okpuru usoro mmekọrịta akụ na ụba, dị ka nrụpụta, ọchịchị eletrọniki, ọrụ mmekọrịta mmadụ na eze, mmepụta ihe ubi na karịa njikwa niile nke ike na akụ na ụba.
A ga-etinye GIS n'ime BIM n'okpuru ọhụụ nke Smart Cities. Ugbu a ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ha ejikọtara ha na nchịkọta data na ịme ihe ngosi, mana ọ dị ka ha ka nwere echiche dị iche iche; Dịka ọmụmaatụ, nhazi akụrụngwa abụghị ọrụ nke GIS, mana ọ bụ ọkachamara ọkachamara na nyocha na nhazi nke ihe gbasara ohere, na atụmanya nke ndapụta, na njikwa nke akụ sitere n'okike na sayensị ụwa niile. Ọ bụrụ na anyị tụlee akụkụ nke isii (6D) na n'oge obodo ndị mara mma, ịkọwapụta, iji, imegharị ma na-ewepụta ike ga-adị mkpa, mgbe ahụ ọ ga-abụ ikike dị mkpa nke ugbu a GIS ji ọpụrụiche dị ukwuu. Ma mgbe ị na-enyocha ikike ịmepụta mmiri nke efere, ịmara ókè mkpụrụ dị mkpa maka cubic mita nke ihe, enwere nnukwu ọdịiche; nke ga-ejupụta ruo n'ókè nke na arụ ọrụ ahụ gụnyere dị ka usoro mmekọrịta nke usoro ọzụzụ abụọ a.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ya, m na-atụkwa anya na m ga-aga n'ihu na-emetụ aka na isiokwu a. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkachamara maka Geo-Engineering hapụrụ ihe ịma aka nke ijikọ onwe anyị na ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha na ịmụ ihe site na teknụzụ, n'ihi na ọ ka na-enyo enyo ma ụzọ Roadmap iji mejuputa BIM nwere ike ịme na-enweghị ntụkwasị obi na Workingtù Ọrụ na-eduga. Karịsịa, n'ihi na a ga-ahụ BIM site n'akụkụ abụọ: Otu bụ na nke ihe a ga-eme na teknụzụ, agụmakwụkwọ, larịị arụmọrụ, na ebumnuche ịkwado ya wee si n'aka gọọmentị, ndị nwere obere oge. , na-echefu na ikike ịchịkwa ha na-adịkarị nwayọ oke. Ọzọkwa, maka ndị nọ n'obodo ndị nwere ike icheworị banyere Smart Cities, ọ dị mkpa na e lekwasịrị anya ụmụ amaala, karịa teknụzụ.
🙂 Ọ bụrụ na ihe atụ a mezuo, nro nke otu onye ndụmọdụ m, onye na-atụ anya ịkụ hekta 3,000 nke oke ọhịa mahogany, yana usoro ndụ enyerela aka yana uto ya, ga-emezu; ya mere enwere m ike ịga ụlọ akụ otu afọ ma gbazinye ego nke mbụ iji jiri nke nta nke nta kwụọ ụgwọ ndị ọzọ. N'ime afọ 20, ị ga-enwe nde cubic mita nke akụ nke ị nwere ike idozi ọ bụghị naanị ezumike nká gị, kamakwa ụgwọ mba ọzọ nke mba gị.
Previous Post«Previous Usoro 5 dị n'ịntanetị maka Cadastre - ihe na-atọ ụtọ
Next Post Foto 13 nke akụkọ ihe mere eme nke Entzụ ahịa mmadụNext »